भरिया भएर सगरमाथा आधार शिविर पुगेका अमेरिकी
[November 26, 2020 06:21:07 AM]
विरानो देशमा पनि पराइ बनेर घुम्न मन नपराउने पर्यटक हुन्, नथानिएल मेनिन्गर। जुन देश पुग्यो त्यहीँको जीवनशैलीमा भिज्ने उनको आफ्नै शैली छ।जोखिमपूर्ण रोमाञ्चको खोजीमा नयाँ अनुभव सँगाल्दै संसार चहार्नु उनको सौख हो। 'एक्स्ट्रिम' र 'क्रेजी' कुरा मन पराउँछु भन्ने उनका सौखको कुनै सीमा नै छैन।
सन् २०१४ मा उनी स्पेनको पाम्पलोनामा थिए। हरेक वर्ष जुलाईमा हुने बुल रन (साँढे दौड) महोत्सवमा सहभागी हुन उनले स्थानीय बुल फाइटरहरूसँग दुई महिना तालिम लिएका थिए। 'फर्स्ट ह्यान्ड' अनुभव लिन चाहने उनी स्पेन, बार्सिलोनामा स्ट्रिप डान्सरसमेत बनेका थिए।
स्पेनपछि उनी संसारकै उत्कृष्ट पाचौं 'स्कुबा डाइभिङ' गन्तव्य मानिने बेलिजको 'ग्रेट ब्लु होल' पुगे। त्यसपछिका छ महिना उनले दक्षिण अमेरिका यात्रामा बिताए। बन्जी जम्पिङ, स्काइङलगायत 'एडभेन्चरस' अनुभव बटुले।
'द पोर्टर' नामको यो डकुमेन्ट्री यस पटकको काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सव (किम्फ) मा छानिएको छ। भर्चुअल रूपमा हुने किम्फको १८ औं संस्करण यही डिसेम्बर १० देखि १४ सम्म चल्नेछ।
किम्फ महोत्सव पूर्वतयारीका रुपमा 'द पोर्टर' गत अक्टोबर १३ देखि १९ सम्म अनलाइन प्रदर्शन भइसकेको छ। प्रदर्शनपछि चलाइएको जुम प्यानल छलफलमा नेपाली भरियाका समस्या, हिमाली जनजीवन र नेपालको पर्यटनबारे कुराकानी समेत भएको थियो।
'नेपाल र संसारभरका दर्शकले द पोर्टर हेरून् भन्ने चाहना थियो। किम्फले त्यो अवसर दिएको छ। एकदमै खुसी छु,' हाल अमेरिकामै रहेका मेनिन्गरले सेतोपाटीसँग अनलाइन वार्तामा भने।
नेपालको प्रकृतिमा विदेशीलाई आकर्षित गर्ने जादू छ। यो जादू मेनिन्गरको देश अमेरिकासम्म फैलिएको छ। उनले भने, 'जसरी नेपालमा अमेरिकाबारे फेन्टासी छ, त्यसरी नै अमेरिकीहरूमा नेपालबारे फेन्टासी छ।'
'यो त प्रकृति र जीवन एकसाथ बुझ्न पाउने अवसर हो,' उनले भने, 'त्यसैले म जहाँ जान्छु, नयाँ कुरा सिक्छु। त्यहीँका मान्छेले जसरी बाँच्ने प्रयास गर्छु। यसो गर्दा यही जूनीमा धेरै जीवन बाँच्न पाइन्छ।'
'भरिया नै बनेर यात्रा गर्ने सोच कसरी आयो?'
'पहिल्यैदेखि धेरै सुनेको भरियाका भोगाइ विदेशी आँखालेभन्दा नेपाली अनुभवबाट बुझ्न मन लागेर,' उनले भने।
इबिसी यात्रामा जाने भरियाले दैनिक १५ सय हाराहारी नगद पाउँछन्। उनीहरूले खाने-बस्ने सबै खर्च यसैबाट चलाउनु पर्छ। फर्किने बेला गतिलो 'टिप्स' मिलेन भने खल्ती टकटकाउने स्थिति आउँछ।
'द पोर्टर' मा भरियाका दैनिकी र संघर्षबाहेक कम पारिश्रमिकको विषयलाई आर्थिक शोषणका रूपमा जोड दिएर उठाइएको छ।
'द पोर्टर अब मेरो अनुभव मात्रै रहेन। यो हिमाली भेगमा थोरै पैसामा भारी बोक्ने नेपाली भरियाहरूको समस्यालाई नजिकबाट चिहाउने माध्यम बनेको छ,' मेनिन्गरले भने।
उनले भने, 'हामीलाई अर्काको काम एकछिन गर्नुपर्दा त झ्याउ लाग्छ। झन् सरकार, ट्रेकिङ कम्पनी, विदेशी पर्यटक र स्थानीयले अलग्गै समूहका रूपमा व्यवहार गर्ने भरियाको जीवन बाँच्नु गाह्रो थियो।'
सबभन्दा सुरूमा उनलाई 'साँच्चिकै भरिया बन्न सकूँला त?' भन्ने प्रश्नले नै तर्साएको रहेछ।
'अर्काको भारी बोकेर हामी कति घन्टा हिँड्न सकौंला? थकान र भोक पेलेर हिँड्नुभन्दा अर्काको जिन्दगी बाँच्नु गाह्रो थियो। मानसिक रूपमा तयार हुनै केही समय लाग्यो,' उनले थपे।
'१३ दिनसम्म उस्तै खाना खाएँ। यस्तो बानी थिएन। अनि मैले आफूलाई भरिया सोचेर हिँडेकाले विदेशीले प्रयोग गर्ने ट्वाइलेट प्रयोग गरिनँ,' उनले भने, 'तर भरियाले प्रयोग गर्ने ट्वाइलेटमा धेरै गाह्रो भयो। त्यसैले सकेसम्म कम जान्थेँ।'
नेपाली भरियाभन्दा बढी कुनै सुख-सुविधा नलिई यात्रा गर्दा उनले लगाउने र नुहाउनेमा पनि सम्झौता गरे। उनले सुनाए, 'कयौं दिन उही लुगा लगाएँ। पसिनाले लुथ्रुक्कै भिजेका लुगा लुक्लामा एकपटक धोए पनि यात्रा अवधिभर नुहाइएन।'
२५ किलोदेखि १०० किलोसम्म भारी बोकेका उनको आफ्नै वजन यात्रा सकिँदा १५ किलो घटेको थियो। भरिया बनेर अन्तिममा उनले सय डलर 'टिप्स' पाएको दृश्य डकुमेन्ट्रीमा देख्न पाइन्छ।
'हामीलाई भरियाहरूको अनुभव जस्ताको तस्तै चित्रण गर्नु थियो,' उनले भने, 'मलाई एकै पटक दुइटा युद्ध लड्न हिँडेझैं भएको थियो।'
'मलाई सबै भरिया साथीहरूले आफ्नै समूहको सदस्यजस्तै व्यवहार गरे। समूहमा तास खेल्दा, गीत गाउँदा मलाई उनीहरूले आफ्नो संसारमा पस्न दिएको महसुस हुन्थ्यो।'
भाषा आए पनि उनमा फिल्मसम्बन्धी खास ज्ञान थिएन। तर उनका बुबा एरिक मेनिन्गर हलिउड फिल्म सम्पादक हुन्। बुबाकै सहयोगमा उनले 'द पोर्टर' सम्पादनको काम गरे।
'यो डकुमेन्ट्रीले धेरै प्राविधिक कुरा पनि सिकायो,' सधैं सिक्न उत्सुक उनले भने।
यतिका यात्रा गरिसकेका मेनिन्गर अहिले पनि हरेक यात्राको सुरूमा 'नर्भस' हुने बताउँछन्। अनि प्रत्येक यात्रापछि भन्छन्, 'यो सम्भव छ भन्ने मलाई कहिल्यै लागेको थिएन। तर अब भन्न सक्छु, सम्भव छ।'
'द पोर्टर' को अवधारणा आफ्नो भए पनि यसलाई उनी साझा अनुभवको दस्तावेज मान्छन्। कोरोना महामारी नभएको भए किम्फ भर्चुअल हुने थिएन। त्यस्तो हुन्थ्यो त उनी यो समय नेपाल आउने तयारीमा हुन्थे। कोरोनाकै कारण डकुमेन्ट्रीसँग जोडिएका सदस्य र भरिया दाजुभाइसँगै बसेर फिल्म हेर्ने उनको रहर पर धेकेलिएको छ।
उनले भने, 'यस पटक मिलेन। चाँडै नेपाल आउने मौका जुरोस्।' - सेतोपाटीवाट
सबै तस्बिर सौजन्यः नथानिएल मेनिन्गर